Abenzi Bemaski | I-China Mask Factory & Abahlinzeki
Lo mkhiqizo usebenzisa isihlungi esinezingqimba ezintathu, esingahlukanisa ngempumelelo izinhlayiya zebhaktheriya ngaphandle kokubamba umoya wakho nokuvimbela ngempumelelo i-haze, impova, nothuli. Iziqu eziphelele, imikhiqizo iqinisekisiwe, indwangu yokuhlunga indwangu yokuhlunga emithathu + indwangu yokuvikela indwangu engalukwanga iphezulu, umsebenzi nesikole kuyaphuma, qapha njalo, isitayela esikhethekile sehlobo, ukukhanya nokuphefumula, Kufanela ubuso, akuxegi, ukumelana okuphansi , ayibambi umoya, imichilo yendlebe eyisicaba ephezulu, inethezekile ukugqokwa futhi ayiqinisi izindlebe.
Isifihla-buso se-N95 singenye yezimaski eziyisishiyagalolunye zokuvikela izinhlayiya eziqinisekiswe yi-NIOSH. “N” kusho ukungazweli kuwoyela. “95 ″ kusho ukuthi lapho kuvezwa inani elithile lezinhlayiya zokuhlola ezikhethekile, ukuminyana kwezinhlayiya ngaphakathi kwemaski kungaphansi kwama-95% ngaphansana kwenhlayiya yezinhlayiya engaphandle kwemaski. Inani lama-95% aliyona isilinganiso, kepha ubuncane. I-N95 akulona igama lomkhiqizo elithile. Uma nje ihlangabezana nezinga le-N95 futhi idlulisa ukubuyekezwa kwe-NIOSH, ingabizwa ngokuthi "imaskhi ye-N95". Izinga lokuvikelwa le-N95 lisho ukuthi ngaphansi kwezimo zokuhlola ezichazwe kuzinga le-NIOSH, ukusebenza ngokusefa kwezinto zokuhlunga imaski kuzinhlayiya ezingekho uwoyela (njengothuli, inkungu ye-asidi, inkungu yokupenda, ama-microorganisms, njll.) Ifinyelela kuma-95%.
Imaski yokuvikela yezokwelapha ilungele ukuvikelwa kwabasebenzi bezokwelapha kanye nabasebenzi abahlobene nabo ezifweni ezithathelwanayo zokuphefumula eziphefumula ngomoya. Luhlobo lokuzihlunga okusondela kuwe lokuvikela okokuvikela olunezinga eliphakeme lokuvikelwa, ikakhulukazi elifanele ukuvezwa emoyeni ngesikhathi sokuxilongwa nokwelashwa noma uma kugqokwa yiziguli ezinezifo zokuphefumula okusakazwa ngamaconsi eduze, leli zinga imaski ingahlunga izinhlayiya emoyeni futhi ivimbe ukungcola njengamaconsi, igazi, uketshezi lomzimba, kanye nezimfihlo. Ukusebenza kokuhlunga kwezinhlayiya ezingekho uwoyela kungafinyelela kuma-95 Ngaphezulu kwama-% afinyelela ezingeni le-N95, okuyithuluzi lokuzivikela elisetshenziswa kakhulu lezifo ezithwalwa umoya. Inokulingana okuhle nobuso bomuntu ogqokile futhi ingumkhiqizo wokusetshenziswa kanye. Amaski okuvikela ezokwelapha angavikela izifo eziningi ezinjengamagciwane kanye nama-virus. I-WHO incoma ukuthi abasebenzi bezokwelapha basebenzise izifihla-buso zokuzivikela kuma-particulate ukuvikela ukutheleleka ngegciwane emoyeni wasesibhedlela.
Imaski yezokwelapha elahlwayo isetshenziselwa ukuvimba izifutho ezisuka emgodini womlomo nasemgodini wamakhala, futhi ingasetshenziselwa ukunakekelwa kwenhlanzeko elahlwayo ezindaweni ezejwayelekile zezokwelapha. Ilungele imisebenzi ejwayelekile yokunakekelwa kwezempilo, njengokuhlanzwa kwendle, ukulungiselela uketshezi, ukuhlanza amashidi ombhede, njll., Noma isithiyo noma ukuvikelwa kwezinhlayiya ngaphandle kwamagciwane amancane anjenge-pollen.